Sida Loogu Guulaysto La Xiriirinta Saamaynayaasha | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 30, 2021 Talaado, Nofeembar 30, 2021 Alexander Frolov
Suuqgeynta saamaynta leh ayaa si dhakhso ah u noqotay arrin ka mid ah olole kasta oo guul leh, oo gaadhay qiimaha suuqa $ 13.8 bilyan oo 2021, tiradaasna waxa la filayaa in ay korodho. Sannadkii labaad ee faafitaanka COVID-19 wuxuu sii waday inuu dardargeliyo caannimada suuqgeynta saameynta leh iyadoo macaamiishu ay weli ku tiirsan yihiin dukaameysiga khadka tooska ah oo ay kordhiyeen adeegsigooda aaladaha warbaahinta bulshada sidii goob ganacsi e-commerce ah.
Iyada oo leh aaladaha sida Instagram, iyo markii ugu dambeysay TikTok, Hirgelinta sifooyinkooda ganacsi bulsheed, waxaa jirta fursad cusub oo u soo baxaysa summadaha si ay uga faa'iidaystaan ​​dadka wax saameeya si ay u kordhiyaan xeeladahooda ganacsiga bulshada.
70% dadka isticmaala intarneedka Mareykanka waxay u badan tahay inay ka iibsadaan alaabada saameeyayaasha ay raacaan, oo ay la socoto kororka la filayo ee iibka ganacsiga bulshada Mareykanka wadar dhan 35.8% in ka badan $ 36 bilyan in 2021.
tirakoobka iyo Sirdoonka Gudaha
Laakin iyada oo ay sii kordheyso fursadaha kafaalaqaadka ee saameeyayaasha, waa lama huraan in qulqulka uu soo galo booskii hore u buuxsamay, taas oo ka dhigaysa xitaa in ay aad ugu adagtahay summadaha si ay u helaan saameyn ku habboon oo ay kula shaqeeyaan. Iyo iskaashiga summadaha saamaynta ku leh si ay u noqdaan kuwa ugu waxtarka badan daawadayaasha la beegsanayo, waxa muhiim ah in iskaashigu noqdo mid dhab ah, oo ku salaysan danaha, yoolalka, iyo qaababka. Raacayaashu waxay si sahal ah u arki karaan qoraallada kafaala-qaadka ah ee aan xaqiiqada ahayn ee ka yimaadda saameeyayaasha iyo isla mar ahaantaana, saameeyayaasha hadda waxay leeyihiin raaxo ay ku diidaan heshiisyada kafaala-qaadka ee aan la jaan qaadin sumaddooda.
Astaantu si ay u dhisto xidhiidho wakhti dheer ah oo ay la yeelato saamaynta ugu wanaagsan ee ololahooda, marka la eego sumcadda iyo ROI, waa inay maskaxda ku hayaan talooyinka soo socda marka ay la xidhiidhaan saamayntooda aadka loo jecel yahay:
Baadh raadiyaha ka hor inta aanad gaadhin
Adeegso aaladaha cilmi baarista iyo fahanka si aad u aqoonsato saameeyayaasha la falgala dhageystayaasha bartilmaameedka ah oo la xiriira sumaddaada. 51% saameeyayaasha ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee aysan ula shuraakoobin calaamad iyaga u dhow ay tahay taas ma jecla ama qiimeeyaan astaanta. Soo saarista liiska saameeyayaasha ee sida dhabta ah ula xidhiidha qiyamka summadaha ayaa saamaynta ugu togan ku yeelan doona ololaha, maadaama qoraaladoodu aad u noqon doonaan kuwo sax ah dhegaystayaashooda, waxayna u badan tahay inay marka hore kula shaqeeyaan.
Calaamaduhu waa inay sidoo kale ku dadaalaan inay qiimeeyaan tayada dhagaystayaasha saamaynta leh maadaama ay jiraan xisaabaadyo badan oo laga yaabo inay leeyihiin taageerayaal aan sax ahayn. 45% xisaabaadka Instagram-ka adduunka ayaa la filayaa inay noqdaan bots ama xisaabaadka aan shaqayn, si loo falanqeeyo saldhig-raacayaasha saamaynta leh ee taageerayaasha dhabta ah waxay xaqiijin kartaa miisaaniyad kasta oo la kharash gareeyo inay gaarto macaamiisha dhabta ah.
Fariintaada gaar uyeel
Saamaynayaashu uma dulqaadan karaan, mana aha in, marka ay timaaddo in lagu soo dhawaado calaamado wata farriimaha qaabka guud, gooya oo dhejiya, iyada oo aan la gaaryeelin iyaga ama goobtooda. 43% ayaa sheegay waligaa ama naadir ma helin fariimaha gaarka ah laga bilaabo noocyada, iyo tirada badan ee macluumaadka saameeyay waxay u janjeeraan inay wadaagaan onlayn, summadaha si fudud ayay tan ugu isticmaali karaan faa'iidadooda si ay u habeeyaan garoonkooda.
Calaamaduhu waa inay waqti iyo tamar ku bixiyaan inay akhriyaan nuxurkooda ku habboon si ay u farsameeyaan farriinta ku habboon saamayn kasta, oo ku habboon codkooda iyo qaabkooda. Tani waxay kordhin doontaa suurtogalnimada in saameeyaha su'aashu ay ku heshiiyaan shuraako, oo ay aad ugu dhiirranaadaan inay soo dhejiyaan nuxurka xiisaha leh.
Noqo qof daah-furan wacyigelintaada bilowga ah
Ha ku garaacin baadiyaha - cad, iyo hufnaantu waa furaha marka aad soo jeedinayso shuruudaha shuraakada aad la yeelanayso saamaynye. Markaad samaynayso wacyigelintaada bilowga ah, hubi inaad wax ka qabato qaabka hore oo ay ku jiraan faahfaahinta muhiimka ah sida waxa alaabtu tahay, wakhtiyada la soo dhejiyo, miisaaniyadaha, iyo wax-qabadyada la filayo. Tani waxay awood u siinaysaa saameeyayuhu inuu sameeyo go'aan xog ogaal ah, si degdeg ah waxayna u ogolaataa labada dhinacba inay iska ilaaliyaan khilaaf ka sii hooseeya wadada.
Waa lama huraan in summaduhu ay ku dhuftaan habka saxda ah ee isgaarsiintooda si ay u door bidaan saamaynta si ay u hubiyaan iskaashi macno leh, oo dhab ah oo ay u wanajiyaan ololahooda suuqgeyneed. Sida warshadaha suuqgeyneed ee saameeyay ay sii wadaan inay barwaaqoobaan, calaamaduhu waxay u baahan doonaan inay la qabsadaan.
Tags: sida loosida loola xidhiidho dadka wax saameeyasida loo dejiyo saameyn wax ku ool ahhanti dhawrkasaameynsuuqgeynta suuqgeynta
Alexander waa agaasime guud isla markaana aasaase ka ah HypeAuditor. Alex waxaa lagu aqoonsaday dhowr jeer liiska Top 50 ee Ciyaartoyda Waxsoosaarka Isagoo Kahadlaya Saameyntiisa shaqadiisa si loo wanaajiyo daahfurnaanta ka dhexjirta warshadaha suuq geynta saamaynta leh. Alex wuxuu hogaaminayaa wadada hagaajinta daahfurnaanta gudaha warshadaha wuxuuna abuuray nidaamka ugu horumarsan ee ku-saleysan khiyaanada AI-ku saleysan si loo dejiyo halbeegga sameynta suuq geynta saamileyda cadaalad, hufnaan, iyo wax ku ool ah.